မျဖစ္မေနပိုက္ဆံစုသင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္း (၇)ခ်က္ by popolay.com
မဖြစ်မနေပိုက်ဆံစုသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း (၇)ချက်
10 Jun 2019 31,612 Views
မိတ်ဆွေ သင်ရောပိုက်ဆံစုနေပြီလား? ပိုက်ဆံစုတဲ့အကျင့်ကို ဘယ်အချိန်ကတည်းက စလုပ်ခဲ့တာလဲ? အခုအချိန်ထိ တစ်ခါမှစုဆောင်းတာမျိုးမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ စတင်သင့်ပါပြီ။ ပိုက်ဆံ ဘယ်လိုစစုရမလဲမေးရင်တော့ ပိုက်ဆံစုဖို့ နည်းလမ်းရယ်လို့ မရှိပါဘူး။ စပြီးစုဖြစ်သွားဖို့ပဲလိုတာပါ။ ဒီမှာ ပိုပိုလေးကနေ မိတ်ဆွေတို့အတွက် ပိုက်ဆံစုသင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်းလေးတွေကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက် ပိုက်ဆံစုပါ။
အရေးပေါ်အခြေအနေဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ? ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ဘဝမှာ ရှေ့လျောက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှကြိုမသိနိုင်ပါဘူး။ ရန်သူမျိုးငါးပါး ရန်ကလဲ ရှိသေးတဲ့အတွက် ဒီအရာတွေ ကိုယ့်အပေါ်ကျရောက်လာရင် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင် ငွေကြိုစုထားဖို့လိုပါတယ်။
ရန်သူမျိုးငါးပါးမှ မဟုတ်ပါဘူး မမြင်နိုင်တဲ့ရောဂါဝေဒနာတွေ မိမိကိုယ်မှာ တစ်ချိန်ချိန် မဖြစ်ပေါ်လာဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက် လဲမဖြစ်မနေပိုက်ဆံစုထားသင့်ပါတယ်။
၂။ မပျော်ရွှင်ရမယ့် အချိန်တွေအတွက်ပိုက်ဆံစုပါ။
လူမှန်ရင် ပျော်တဲ့အချိန်လဲရှိတတ်သလို စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်ရှိတတ်တာသဘာဝပါပဲ။ မပျော်တော့တဲ့ အချိန်၊ အဆင်မပြေတော့တဲ့ စိတ်အခြေအနေမျိုးမှာ မိမိစိတ်ကို ခဏလောက်လွှတ်ပေးလိုက်တာမျိုးတွေ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
ဥပမာ စိတ်မပျော်ရင် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယတွေတစ်ပုံတစ်ပင်ကြီး ဝယ်လိုက်တာမျိုး၊ တစ်ယောက်တည်းခရီးထွက်လိုက်တာမျိုး၊ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး အတူလည်ပတ်ပစ်တာမျိုး တွေပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုတာကလဲ အနည်းနဲ့အများလက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံရှိထားမှ လုပ်လို့ရတာမို့ မပျော်ရွှင်ရမယ့် အချိန်တွေအတွက် ပိုက်ဆံကြိုစုထားဖို့လဲလိုပါတယ်။
ဘယ်ပညာမျိုးမဆို ပညာရပ်တစ်ခုခုကို အမြဲလိုချင်နေတဲ့သူ၊ သင်ယူတတ်မြောက်ချင်တဲ့သူဟာ ဘယ်တော့မှအိုမင်းမသွားပဲ စိတ်ရောလူပါ အမြဲနုပျိုနေတာမျိုးတွေ့ရမှာပါ။ သင်စိတ်ရော၊ လူပါ အမြဲနုပျိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အသစ်အသစ်သော ပညာတွေကိုအမြဲသင်ယူနေသင့်ပါတယ်။ ပညာဆိုသည်မှာလဲ အလကားမရတာကြောင့် ပညာသင်နိုင်ဖို့ ပိုက်ဆံစုထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၄။ အိမ်ဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံစုပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာတွေအရ လူတိုင်းမိဘဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်သိပ်မရှိကြတာတွေ့ရမှာပါ။ သင့်ဘဝမှာကိုယ်ပိုင်အိမ်တစ်လုံး ပိုင်ဆိုင်ဖို့ အိပ်မက်တွေရှိဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်ဝယ်ဖို့မဖြစ်မနေ ပိုက်ဆံစုထားသင့်နေပါပြီ။
စိတ်ပြေလက်ပျောက်ခရီးထွက်ဖို့ ပိုက်ဆံစုပါ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချစ်သူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အပျော်ခရီးလေးထွက်ဖို့ ပိုက်ဆံလေးတွေကြိုစုထားသင့်ပါတယ်။ ချစ်ခင်ရင်းနှီးသူတွေနဲ့ ခရီးထွက်ရတာဟာ ဘယ်လောက်တောင်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုလဲနော်။ တွေးကြည့်ရုံနဲ့တင်ကြည်နူးစရာကောင်းလှပါတယ်။ ဒီလို ပျော်ရွှင်မှုမျိုးပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ပိုက်ဆံကြိုစုထားဖို့လိုပါတယ်။
၆။ စီးပွားရေး အကြပ်အတည်းအတွက် ပိုက်ဆံစုပါ။
စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ အမြဲကောင်းနေမယ်လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။ တက်တဲ့အချိန်ဆိုတာရှိသလို ကျချိန်ဆိုတာလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးကျဆင်းချိန် အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင် ပိုက်ဆံကြိုစုထားဖို့လိုပါတယ်။
သင်ဟာ အစိုးရဝန်ထမ်းတစ်ဦးဆိုရင်တော့ပင်စင်လစာရတာမှန်ပေမယ့် ဒါဟာတကယ့်လက်တွေ့ဘဝမှာ စားမလောက်တဲ့ ပိုက်ဆံနှုန်းထားမျှသာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်ပဲ သာမန်အပြင်ဝန်ထမ်း၊ လုပ်သားများဆိုရင်တော့ ပင်စင်လစာလဲမရှိတဲ့အတွက် ရှေ့ရေးကြိုတွေးပြီး မဖြစ်မနေပိုက်ဆံစုထားဖို့လိုပါတယ်။ လူမှန်ရင် တစ်ချိန်ချိန်မှာ မဖြစ်မနေအိုရမှာမို့ အိုစာ၊မင်းစာ ချန်ပြီး ပိုက်ဆံစုထားသင့်ပါတယ်။
အထက်ပါ အချက်တွေထဲက အချက်တွေအကုန်လုံးနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ပိုက်ဆံမစုနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် တစ်ချက်လောက်ဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ စုမိနေပြီဆိုကတည်းက သင်ဟာ အလားအလာကောင်းနေပါပြီ။ အခုကစပြီး ပိုက်ဆံစုလိုက်ကြရအောင်။